Beijing mankany Belgrade: sidina mivantana amin'ny Hainan Airlines
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Beijing mankany Belgrade: sidina mivantana amin'ny Hainan Airlines
Ny sidina voalohany an'ny serivisy vaovao, Hainan Airlines HU7937, izay niainga tamin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Beijing Capital, dia tonga soa aman-tsara tao amin'ny Seranam-piaramanidina Belgrade Nikola Tesla ao 9: 20 pm on Septambra 15, 2017 ora eo an-toerana aorian'ny 13 ora eny amin'ny rivotra. Ny lanonana fankalazana sy fanapahana tadin-dokanga ho an'ny sidina zazavavy dia natrehan'ny praiminisitra Serbia Ana Brnabic, Ny praiminisitra lefitra ary ny minisitry ny fanorenana Zorana Mihajlović, masoivoho sinoa any Serbia Li Manchang, filoha lefitra Hainan Airlines Quan Dong ary ireo mpitantana ao amin'ny orinasa sinoa maromaro miaraka am-perinasa ao Serbia ary koa vondrona mpitarika indostrialy sy olo-manan-kaja ao an-toerana.
Ny praiminisitra Serba Ana Brnabic nilaza tamin'ny lahateniny fa ny haavon'ny fiaraha-miasa eo Shina ary Serbia dia nitombo be, miaraka amin'ny sanda totalin'ny tetikasa misy eo amin'ny firenena roa tonta ankehitriny 6 lavitrisa dolara amerikana, raha, miaraka amin'izay koa, ny varotra roa tonta dia nitombo tokoa. Ny masoivoho sinoa any Serbia Li Manchang dia nilaza fa misy fivoarana vaovao miseho isan'andro eo amin'ny firenena roa tonta ary ny fiverenan'ny serivisy mivantana mivantana eo anelanelan'ny renivohitra roa dia porofo iray hafa amin'ny fitomboan'ny tanjaky ny fifandraisana. Mifanaraka amin'ny Shina Fehikibo iray, Fandraisana an-tanana One Road, Hainan Airlines dia mikasa ny hanohy hanitatra ny fisiany ivelan'ny tsenany an-trano, indrindra manerana ny firenena afovoany sy Eoropa atsinanana, ny ankamaroan'izy ireo dia efa nametraka fifandraisana akaiky Shina, hoy izy Quan Dong.
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny Hainan Airlines dia nahazo tombony haingana tamin'ny fidirany eo amin'ny sehatra iraisampirenena, miaraka amin'ny ampaham-bidin'ny fidiram-bola azo avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena mitombo isan-taona. Amin'ny tapany faharoa amin'ity taona ity, ho fanampin'ny Beijing-Prague-Belgrade ary Shanghai-Tel Aviv serivisy izay efa miasa, Hainan Airlines dia kasaina hanomboka ihany koa Shanghai-Brussels, Shenzhen-Brisbane, Chongqing-New York, Chengdu-New York, Shenzhen-Brisbane ary ny serivisy Shenzhen-Cairns ary koa ny làlana iraisam-pirenena maro hafa, manitatra hatrany ny tamba-jotra iraisampirenena eran-tany.
Serivisy mivantana any amin'ny Hainan Airlines i Shenzhen mankany Brisbane
Ny tranombakoka lehibe indrindra momba ny tantaram-piainan'ny olona eto Afrika dia hanomboka amin'ny fisokafana lehibe